စက်မှုလုပ်ငန်း Honeysuckle ပန်းပွင့် Dehydrator Machine DPPG150s-x Tsix | Twesix
Freeze ပန်းပွင့် Dehydrator စက် DPHG150s-X Tsix တွင်ပန်းများခြောက်သွေ့သောပန်းများကိုခြောက်သွေ့စေရန်
ပန်းပွင့်များအတွက် Tsix ရေခဲသေတ္တာ dehydrator ဟုခေါ်သောအပူစုပ်စက်ခြောက်စက်များဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်လေကို 25 မှ 70 ဒီဂရီအထိခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုခြောက်သွေ့စေသောကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုခြောက်သွေ့စေရန်, ခြောက်သွေ့သောရေနံတူးဖော်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ dehumdifying funtions ။ ယနေ့ခေတ်တွင်စက်ရုံများစွာသည်အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအတွက်ပန်းများခြောက်သွေ့စေရန်အပူစုပ်စက်ခြောက်စက်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
တာရှည်ခံ: Twsix ပန်းပွင့်ခန်း dehydrolator ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ Twsix ပန်းပွင့် Dehydrator သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏တင်းကျပ်မှုအားလုံးကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်တာရှည်ခံပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ Twsix Industrial Honeysuckle ပန်းပွင့်ခန်းသည်သင်အကြိုက်ဆုံးပန်းပွင့်များကိုခြောက်သွေ့စေရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားစွာဖြင့်ဤခန်းမသည်အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Twsix Industrial Honeysuckle ပန်းပွင့်ခန်းခြောက်သွေ့ခြင်း, အရွက်များ, သစ်သီးများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ပျိုးပင်များ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ပျိုးပင်များ, မှိုများ, ငါး,
ပန်းများခြောက်သွေ့သောပန်းများသည်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးပန်းများပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ပန်းများကိုပန်းပွင့်လက်ဖက်ရည်, လူရွှင်တော်များ, ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြောက်လှန်းသောပန်းများ၏အရောင်နှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအများစုမှာကျန်ရှိနေရမည်။ Tsix Freeze Freeze Dehydrator အားဖြင့်အပူချိန်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ခြောက်သွေ့သောစက်သည်ပန်းများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုခြောက်သွေ့သောပန်းများ, ပြီးတော့အောက်ပါဖြစ်စဉ်ကိုအပူချိန်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာလာပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံ, ခြောက်သွေ့သောပန်းများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအနေဖြင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှေးကွေးစွာနှေးကွေးပြီးအပူချိန်တဖြည်းဖြည်းပိုမိုမြင့်မားလာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွက်အစားအစာခြောက်သွေ့စက်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် Tsix ခြောက်သွေ့စက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိသည်။ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအရောင်းဌာနနှစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
Tsix Beder Drying စက်စက်ရုံစက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ, Guangdong ပြည်နယ် Foshan တွင်တည်ရှိသည်။
1.Factory, oem / odm အမိန့်ကိုလုပ်ပါ
2. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်0န်ဆောင်မှုပြီးနောက်
3.copeland compressor နှင့် Schneider အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
2014 ခုနှစ်မှစ. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစားအစာခြောက်သွေ့စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အစားအစာခြောက်သွေ့ခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းပေးသူအား 2014 ခုနှစ်မှစ. "Tsix" စီးရီးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သောက်သုံးရေအတွက်ရေအရင်းအမြစ်အပူပေးစက်များကဲ့သို့သော "Tsix" စီးရီးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လေထုရေစိုခံခြင်းစုပ်စက်များနှင့်ရေအရင်းအမြစ်များကိုသောက်သုံးခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များကိုဗြိတိန်, သြစတြေးလျ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အိန္ဒိယ, စင်ကာပူ, ထိုင်း, မလေးရှား, ဘရာဇီး, ဘရာဇီး, ရုရှား, ရုရှားနှင့်တောင်အာဖရိက, ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးကိုအာမခံသောစက်များ၏စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။
Freeze ပန်းပွင့်ခြောက်စက် ပန်းပွင့်ခြောက်စက် ပန်းပွင့်ရေဓာတ် dehydrated စက် Freeze ပန်းပွင့် deddydrated စက်